उडायो सपना सबै डिभीले ::netpatrika
उडायो सपना सबै डिभीले
नेपालमा अहिले डिभी भर्नेको लहड चलेको छ । काठमाण्डौका गल्ली गल्लीमा डीभी भरीन्छका बोर्ड लागेका पसल देखिन्छन् । डिभी भरेर अमेरिका जान चाहनाले नेपालीलाई यस्ता पसलले तान्नु कुनै नया कुरा पनि हैन । तर म पनि केही वर्ष तीनै डिभी परेर अमेरिका पुगेका मानिसहरुको आसपास नै बसेर फर्किएकी महिला भएकोले मैले त्यहा देखेको एउटा घटना पाठक सामु राख्नै पर्ने जस्तो लाग्यो ।
क्रिशमसको बेलामा विश्वमा सवै भन्दा रमाइलो न्युयोर्कमा मनाइन्छ भन्दै सुनेको थिए । त्यो समय मेरो न्युयोर्कको पहिलो क्रिशमस थियो । मैले साथीलाई क्रिशमसको दिन म्यानहटनको क्रिशमस ट्री हेर्ने विचार राखे । साझ पनि नपर्दै हामी म्यानहटन पुगिसकेका थियौ । व्रिmशमसको रमभम हेरेर फर्कदा अर्को दिनको सुरुवात भैसकेको थियो मतलव एक बजी सकेको थियो । हामी ट्रेन बाट ओर्लेर घर तिर पैदल नै हिडदै थियौ एक जना मानिस बाटो नापिरहेको देखियो । ऊ मात्र आमाआमा भनेर रोइरहेको थियो । आमा शब्द सुनेपछि नेपाली पो रहेछ भन्ने थाहा पाएर म र मेरो साथी भएर उसलाइ टयाक्सीमा राखेर हाम्रो घरमा ल्यायौँ । साथीले आफ्नो कोठामा उसलाई सुताइ दियो र ऊ मेरो कोठाको सोफामा आएर सुत्यो । आज चार वर्ष पछि मलाई त्यै नेपाली दाईको याद आइरहेछ ।
रक्सीमा मातेर थाहा नपाई सुतेको मानिस भोलिपल्ट बिहान अाँखा खुलेपछि त त्यो दाईले सर्माउदै भन्नु भयो –“सरी” । हामीले उहाँलाई चिया दिँदै भनेका थियाँै –“ किन दाइ, दारुमा त आमाको खुब नाम लिरहनु भएको थियो नि” । त्यो दिन त उहाँले नशाले भनेर कुरा बटार्दै बाटो तताउनु भो । दुई हप्ता जस्तो पछि फेरि त्यो दाईसित मेरो बाटोमा भेट भयो । त्यो समयमा उहाँ सहिसलामत हुनुहुन्थ्यो । चिया पिउन जाऊँँ भन्दै मैले उहाँलाई घरमा लिएर गएँ । “दाई, रातो कि दुध हालेको कस्तो चिया खाने ”भनेर मैले सोधेको मात्र के थिएँ कि दाइ त रुन लाग्नुभो । विराटनगरमा भएकी दाइकी बहिनीले सोधेकोजस्तो लाग्यो रे दाइलाई । मलाई लाग्यो – भर्खर आएको होला अमेरिका, होमसिक भएछ । “दाइ नरुनु ल, भन्नु –के छ मनमा म पनि बहिनी नै हुँ मनको पीर कसैको सामू पोखियो भने मन हल्का हुन्छ । भन्नु – मलाइ, के पीर छ हजुरलाई ”। पछि दाइले चिया पिउँदै नेपाल देखिनै सुरु भएको आफ्ना कुरा मलाई सुनाउनु भो ।
“अमेरिका कसलाइ जान मन लाग्दैन र ? त्यसमाथि जागिर तलमाथि परेको बेलामा त झन् चिन्ता हुनु स्वभाविक नै हो । मेरो घर सम्पन्नताले भरिपुर्ण थियो । आमा श्रीमती दुई छोराछोरी सानो सुखी परिवार । परिवारका सदस्यको आवश्यकताअनुसार चाहेको पुराउन सक्ने आम्दानी भएको मेरो जागिर थियो । तर कम्पनी घाटामा गएकोले कम्पनी नै बन्द हुने हल्ला चलिरहेको थियो । अफिसबाट घर फर्कदा अनायस मेरो अाँखा डिभीको विज्ञापन राखेको पसलमा पुग्यो । म पसलभित्र पसँे, भरेँ अमेरिका जाने फर्म । केही महिना पछि त्यै पसलेले मलाई फोन बाट जानकारी दियो – म त छानीएँ रे । डिभीको बाँकी सब काम सकिएपछि आमालाई घरमा एक्लै छोडेर हामी त लाग्याँै अमेरिका । अमेरिका पस्नासाथ बोटबाट डलर टिप्न पो पाइने हो कि जस्तो सोच बनाएर अमेरिका पसेको मैले पाँच महिनासम्म कुनै काम पाइँन । श्रीमतीको त झन अङग्रेजी बोल्न नजान्ने समस्याले गाहे होला जस्तो लागेको थियो । तर मैलेभन्दा श्रीमतीले नै काम पाइन चाँडो । हामी काठमाडाँैबाट गाउँ जाँदा मालिक मालिक्नी आए भनेर कमैयाहरू जीउमा तेल लगाउन आउँथे भने यहाँ श्रीमतीले त्यै काम पाइन् पसलमा आउने ग्राहकहरूको जीउ मालिस गर्ने – चाहे त्यो केटा होस् या केटी । के गर्ने, त्यतिखेर हाम्रो अवस्था यस्तो भैसकेको थियो कि हामीले काम नपाए भोकै बस्नुपर्ने समय आइसकेको थियो । अनि त मन अमिलो पार्दै श्रीमतीलाई यस्तो काम गर्न पनि मैले अनुमति दिएँ । श्रीमतीको कमाइ खाएर म काम खोज्दै थिएँ, अमेरिका आएको पाँच महिनापछि मैले काम पाएँ । पाकिस्तानीको रेस्टुरेन्टमा भाडा माझ्ने काम । केही काम नभएकाले मैले त्यही भए पनि गर्दै गरूँ भनेर काम शुरु गरँे । काम शुरु गरेको दुई हप्तामै मेरो प्रमोशन भयो वेटरमा । तीन महिनापछि रातीको सिप्टको क्यासमा बस्ने मान्छेले काम छोड्यो । साहुले पैसा पनि बढ्छ, काम पनि राम्रो गर्छाै भनेर सोध्यो । मैले नेपालबाट आउँदाको ऋण सम्झेर हुन्छ भनिदिएँ । दिउसो सुत्ने, राती उठ्ने शरिरले नाइँनाइँ भने पनि ऋण तिर्नको लागि म काममा तल्लीन नै भएँ । मेरो र श्रीमतीको भेट अब हप्तामा एक दिन मात्र हुन थालेको थियो । उनी घर आइपुग्दा म काममा हिडिसक्ने ! म आउँदा उनी हिडिँसक्ने । हामी त काम गरिरहेका थियाँै तर केटाकेटीहरू निस्ताइरहेका थिए । सधै आमाबाबु र हजुरआमाको काखमा हुर्किएका हाम्रा नानीहरू एक्लाएक्लै घरमा बस्न बाध्य थिए । भोक लागेको सुनिदिने उनीहरूका अभिभावक उनीहरूको सामुन्ने थिएनन् । हामी दुवैजना गाँस, बास, कपास र नेपालबाट ल्याएको ऋण तिर्नको लागि काममा नै ब्यस्त भएर छोराछोरीलाई समय दिन सकिरहेका थिएनाँै ।
छोराछोरीलाई हामीले घरमा समय दिन नसकेको भनेर स्कूलबाट पत्रहरू आइ रहन्थे । दिनको बाह्चौध घण्टा परिश्रम गरेपछि घरमा आएर खानुभन्दा पनि सुत्न हतार भइरहेको हुन्थ्यो ।
“छोराको पेन्टमा चुरोटको ठूटो भेट्याएँ लुगा धँुदा” – एक दिन श्रीमतीले भनिन् । ओहो, छोरो बिग्रने भयो कि क्या हो ? अमेरिकामा छोराछोरी कुट्नु हँुदैन छिमेकीले थाहा पाए र पोलिदिए भने पुलिस आएर सजाय दिन्छ रे भन्ने सुनेको थिएँ । छोरालाई समय दिएर सम्झाउन मसित समय थिएन । बोलाएर सिधै गाली गरँे । तर छोरोमा मेरो गालीले कुनै असर गरेन छ ऊ बिँग्रदै गएछ । एक दिन त मलमा गएर चोरी गरेछ । क्यामरामा देखिइहाल्यो, पुलिसले समाएछ र मलाई काममा छँदै फोन ग¥यो । फोन सुन्नासाथ म मलमा पुगँे छोरालाई समय दिन्छु भन्ने वाचाबन्धन गराएर मात्र पुलिसले छोरो मलाई दियो । छोरोले फेरि त्यो मलभित्र पस्न नपाउने गरी केके फोटो र छापहरू लिएर मात्र छोरालाई छोडिदिए । अब मेरो छोरो त्यो मलभित्र पस्यो भने साइरन बच्छ रे । मन अमिलो पार्दै म छोरालाई लिएर घर फर्किए । घरमा आएर बुढीसित कुरा गर्दै मैले भने – “अब छोराको भविष्य के होला ? उसले त पुरै जिन्दगी अमेरिकामा बिताउनु पर्ने र यो उमेरमा नै पुलिसमा छोरोको रेकर्ड नराम्रो भयो ।” अब के गर्ने होला भनेर हामी दुबै चिन्तित भयाँै । त्यो दिन बुढी पनि काममा जान सकिनन् । घरमा त्यो दिन हामी दुवै बुढाबुढीलाई केही खान मन लागेन । हामी दुवै केही नखाई बिस्तरामा पल्टियाँै ।
पुलिसमा हाम्रो घर र छोराको सबै रेकर्ड त छँदै थियो, त्यसपछि अमेरिकन प्रहरी त दिउँसो, साँझ छोराछोरीहरू मात्र घरमा भएको समय पारेर घरमा आएर छोराछोरीसित गफ गर्न थालेका रहेछन् । केटाकेटीहरूलाई अनेक थरी उपहार दिँदै उनीहरूसित अनेक कुरा – जस्तो हामीले छोराछोरीलाई समय दिएको छ कि छैन बुभ्mने गर्दा रहेछन् । त्यो थाहा पाएपछि हामीले एकजना घरमा हुनेगरी काम गर्ने समय घटायाँै । म राती, श्रीमती दिउँसो नै काम गर्न थाल्यौँ । तर के गर्नू, हाम्रो त्यो निर्णय ढिला भइ सकेको रहेछ । एक दिन त छोरो स्कूलबाट ढिलो फर्कियो, श्रीमती आइसकेपछि पनि छोरो आएन । मलाई काममा जान ढिला भैसकेको थियो तर छोराको खोजी त गर्नै प¥यो । हामी यताउता फोन गर्दै उसकोे खोजी गर्न थाल्याँै । अलिराती भैसकेपछि छोरो रक्सीले मात्तिएर घर आयो । मलाई सारै रिस उठ्यो मैले दुईतीन झापड छोरालाई हानँे । ऊ रुँदै बेडरुममा पसेको थियो, पुलिसलाई पो फोन गरेछ । नाबालक छोराले रक्सी खायो भनेर चड्काएको त केही बेरमै ठूलो घटना भएजस्तो घरभित्र, बाहिर, बाटो सबैतिर पुलिस नै पुलिस ! पुलिस आएपछि पो हामीले छोराले फोन गरेर पो पुलिसलाई बोलाएको कुरा थाहा पायाँै । रक्सी खाने छोराले केही गल्ती गरेन, तर मैले गल्ती गरँे छोरालाई पिटेर, पुलिसले हामीलाई नै दोषी बनायो । मलाई केही कागजहरूमा सहीगर्न लगाएर हाम्रो छोरालाई लिएर पुलिस गयो । पुलिसको भनाइअनुसार अब हामीले छोरालाई वालिग भएपछि मात्र पाउने रे । छोरो वालिग नभै हामीले उसलाई भेटन पनि पाउदैनाँै रे । त्यो दिन पुलिसले छोरालाई लिएर गएदेखि हामीले छोरालाई देख्न पनि पाएका थिएनाँै । अब हामीसित छोरी मात्र थिई ।
छोरो गएको एकवर्ष पनि नभई हाम्री बच्ची पनि उसकोे ब्वाइफ्रेन्डसित बस्न गई । छोरीले पनि छोडेर गई भनेर हामी पुलिसमा रिपोट गर्न गयाँै भने फेरिहाम्रै दोष देखाएर हामीलाई नै जेल हालीदिन्छ कि भनेर हामी चुप नै भयौँ । हाम्रो नेपालमा भए छोरी पोइल गइ भनिन्थ्यो तर यहाँ लिभिङ्ग टुगेदर रे । जे भने पनि हाम्रो मनस्थिति त नेपाली नै हो नि । हामीले हाम्रो संस्कार छोरीलाई पनि दिन सकेनछौँ । छोरी आफ्नो रगत, माया त लागि हाल्छ नि । ऊ घरमा आउनजान गर्न थालिसकेकी थिई । छोरीको मायाले गर्दा हामीले कालेलाई पनि स्विकार्नै परेको थियो ।
हामी बुढाबूढीको काम रातदिनकै थियो । दुईजना मात्र भएकाले फेरी हाम्रो कामको समय बढ्दै गयो । हामी दुवै जिउँदो लासजस्तो भएका थियाँै । हामीमा अरू नेपाली साथीभाइले गरेको प्रश्नको जवाफ थिएन पनि र बोल्न सक्ने हिम्मत पनि थिएन । त्यसैले हामी नेपालीहरूको सम्पर्कभन्दा टाढा गएर बसेका थियौँ । एक दुईजना नजिकका मानिएका साथीहरूको मात्र हाम्रो घरमा आउजाउ थियो । घरमा बस्दा अनेक कुराहरू मनमा खेल्ने भएकाले म जतिसक्दो धेरै घण्टा काममा नै बिताउन थालेको थिएँ ।
एक दिन म घर पुग्दा मूलढोका खोल्नासाथ ढोकाको मुनि एउटा खाम देखेँ, के रहेछ भनेर उठाएर हेर्दा त मेरै श्रीमतीले लेखेको पत्र पो रहेछ ! पत्रमा भनिएको थियो –“म हजुरको घर आजै देखि छोड्दै छु । म आफ्नो बाटो लागँे, मेरो खोजिगरिरहनु जरुरी छैन” । मैले केही सोच्न सकिँन – यो पत्रको आशय के हो भनेर । धेरै पीर भएकोले कतै उसले आत्माहत्या त गर्न लागिन ! कि के हो ? मैले छोरीलाई फोन गरँे । छोरी र उसकोे प्रेमी दुवै आए । हामी सबैले उनको खोजी ग¥यौँ, पत्ता लागेन । भोलिपल्ट मैले कामबाट छुट्टी लिएँ, हामी पुलिस रिपोर्ट गर्न जानै लागेका थियाँै कि छोरीको मोबाइल बज्यो । उनले कुरा गरिसकेपछि छोरी रुँदै मनेर आएर बसिन् । आमाले फोन गरेकी रे , आमाले अर्को विवाह गरेको रे । आमा त रमेश अङ्कलसित पो बिहे गरेर जानु भएको रहेछ ! अहो, मेरै साथी । मेरो परिवार, सबैले मलाई छाडिसकेका थिए । आधा अङ्ग अर्धाङ्गनीले त झन् मलाई जिउँदै गाडेर मेरै साथीसित छि ! अब मेरो बाँच्नुको उदेश्य नै के रह्यो र ? अहो मेरो जिन्दगीले कुन रूप लियो !
केही दिनपछि छोरीले आमालाई भेटिन रे । त्यसपछि आमाछोरीको भेट भइ नै रहन्थ्यो, जुन कुरा मलाई छोरीले बेलाबेलामा भन्ने गर्दथिन् । मेरो साथी र मेरी भुतपूर्व श्रीमती बस्ने घर तपाईको घर बाट एक दम नजिक छ र मेरो घरबाट पनि टाढा छैन । एक दिन बाटोमा मैले मेरो त्यै साथीलाई भेटेँ । म देखेको नदेखै गरेर बढेको थिएँ उसले नै मलाई रोक्यो र भन्यो – हाई, के छ खबर ? नरिसाऊ, के गर्ने, त्यस्तै भैहाल्यो । तिमी नभएको बेलामा तिम्रो घरमा जान्थेँ कहिले हामीबिच माया पिरती भयो, मैले पनि थाहा पाइँन । म त भाउजूसित गफ गरेर उहाँको पीर केही कम गर्न सक्छु कि भनेर गएको त हामी कहिले नजिक भएछौँ – उनी गर्भवती भएपछि पो होस आयो । गर्भपात गराउन खोजेको ढिलो भयो भन्यो डाक्टरले । अनि के गर्ने । न चाहँदा न चाँहदै हामीले यै निर्णय गर्नु प¥यो ।
उनले छोरा पाइन् रे, छोरीले एक दिन मलाई भनी । बच्चा तीन महिनाको जत्ति हुँदो हो, एक दिन छोरीले उसलाइ लिएर आइन् मेरो घरमा र मलाइ देखाउँदै भनिन् –बुबा भाइ । मलाई त्यो भाइ शब्द यत्ति दर्दनाक भयो कि म के भनौँ ।
दिन बित्दै गइरहेका थिए । छोरीकी आमा पनि कहिलेकाहीँ घरमा आउन थालिसकेकी थिइन् । मलाई उनी मेरो घरमा आएको कत्ति पनि मन पर्दैनथियो तर म नआऊ पनि भन्न सक्दिनथिएँ किनकि त्यो घर त सबै उनकै सृष्टी त थियो ।
त्यो बच्चा पनि अहिले तीन वर्षको भैसकेको छ । मलाई छोरीले बुबा भनेको भएर होला ऊ पनि मलाई बुबा नै भनेर बोलाउँछ । ऊ मसित तोते बोलिले बोल्न आउँछ , मसित बोल्न आउनु उसकोे गल्ती त होइन तर उसकोे तोते बोली नै मेरो टाउकोमा बज्रपात भएको भान हुन्छ मलाई । त्यो अबोध बालकसित के रिस तर मलाई त्योसित बोल्न, खेल्न मन लाग्दैन । सानु मानिस तर ठूलो दुश्मन देख्दछु म त्यो बालक लाई ।
नेपालमा एक्लै छोडेर आएको आमाको फोन आइरहन्थ्यो मलाई – “आइज न एकपल्ट नेपाल, कहिले आउछस् ? के म मरे पछि मेरो क्रिया गर्न मात्र आउछस् कि के हो ?” म के भन्दै जाऊँ नेपाल ? आमालाई केही थाहा छैन, मेरी बुहारी, नाति, नातिनी खोइ भन्नुभयो भने म के जवाफ दिऊँ ? यहाँ मलाई चिन्ने एकदमै कम मानिस छन् , तिनीहरूसित म भागेर पनि बाँच्न सक्छु या मेरो बारेमा थाहा पाएर पनि उनीहरूले मलाई सोध्ने आँट गर्दैनन् । तर नेपालको हाम्रो समाज – म कसकसलाई केके जवाफ दिँदै हिड्नू । एकातिर मेरी आमा छोरो आउँछ कि भनेर मेरो बाटो हेर्दै हुनु हुन्थ्यो भने यहाँ म मेरो छोराको बाटो हेरिरहेको छु । अब त उसकोे आउने उमेर हुनेबेला भयो अब त आउला कि भन्दै ।
एक महिना नाघ्न लागिसक्यो – आमा बित्नु भयो, आफ्नो परिवारको मुख नै हेर्न नपाई । आमा मरेको खबर पाएतापनि कामबाट बिदा दिएन भनेर म गईन नेपाल । म एक्लो छोरो, नेपालमा भए कोराभित्र बसेर आमाको काजकृया गर्नुपर्ने तर म यहाँ के गरू एक्लै ? मैले आमाको दशधारा दूधको भारा पनि तिर्न सकिँन । दुखद समाचार सुनेपछि मनलाई सम्हल्नै सकिनँ र त्यै दिन म निस्किएको थिएँ, जुन दिन तपाईहरूले मलाई रक्सीको धुनमा भेटेर आफ्नो घरमा लिएर आउनु भएको थियो । के गर्नु बैनी रक्सी खाए पनि पीर त भुलाउन सकिन्न रहेछ , निस्किहाल्ने रहेछ, त्यै तपाईहरूले सुन्नुभयो । केके सपना लिएर अमेरिका आइएको थियो, केके भयो । सब खत्तम भयो । उडायो सपना सबै डिभीले । ”
साभार नागरिक दैनिक